Maalinta: Maarso 31, 2020
Gaadiidka Mehmetçik, oo shaqada laga caydhiyay isagoo dhammaystiray waajibaadkiisii ​​qaran ee bariga iyo koonfurta bari ee Anatolia, ayaa u sii gudbiyey Ankara Intercity Terminal Terminal (AŞTİ) basas ay bixiso EGO General Directorate. Codsiga Wasaaradda Difaaca Qaranka, ka dhanka ah cudurka coronavirus (Covid-19) [More ...]
Khadka isku xirka Dekadda Nemport, ee lagu dhammeeyay baaxadda mashruuca isku xirka dekedaha iyo tareenka, ayaa loo furay rarka iyo soo dejinta gawaarida. Xariiqda isgoyska ee ka tagaya Saldhigga Bivaerova oo taga Nemport Port waa isku darka dhererkiisu dhan yahay 3 KM waana 484 mitir. [More ...]
Degmada Tekirdağ Magaalo-Weyne waxay sii wadaysaa dadaalkeeda sifeynta si joogto ah marka loo eego la-dagaallanka cudurka faafa. Xaaladda guud, basaska ka shaqeeya Tekirdağ Magaalo-Weynta Gaadiidka Dadweynaha ee Nidaamka Gaadiidka Dadweynaha waxaa baabi'iya waaxda Arimaha Caafimaadka maalin walba daadiya. [More ...]
Iyada oo la eegayo cabirrada ilaalinta corona ee fayraska corona, Boorarka Masaafada Bulshada ee ay daabacday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa si ku-meelgaar ah hoos u dhigtay heerka degenaanshaha 50% iyadoo la keenay qorshe cusub oo kuraas loogu talagalay gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya magaalada Şanlıurfa ee Magaaladda Metropolitan. [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ka qeyb galay barnaamijka suxufiyada Ayşenur Arslan barnaamijka "Medya Mahallesi", isagoo toos uga sii daayo TVga Halk. Halganka waxaa bilaabmay cudurka faafa ee coronavirus ee saameeya adduunka iyo dalkeenna, hay'ad dawladeed ma banaana. [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha Suleiman bandow jidadka Noble oo ku saabsan, "nooc cusub oo corona ee Turkey (Kovid-19) lagu gaarey gudahood baaxadda tallaabooyin go'doon uu bulshada. Kama labalaabno qaadashada taxaddar kasta. Ku dhawaad ​​95% nolosha hada guriga ayaa la geeyay. [More ...]
Sababtoo ah cudurka dillaaca coronavirus ee saameeyay adduunka oo dhan, magaalada caasimadda ayaa dhageysatay baaqa Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavas "At HomeKalAnkara". Tirada muwaadiniinta isticmaala gaadiidka dadweynaha ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 84. 2-da Maarso [More ...]
Ilaa saaka, Warshadda TÜVASAŞ waxay joojisay wax soo saarka in muddo ah. Qaybta halka wax soo saarka tareenka qaran lagu sameeyo warshadda ayaa sii wadi doonta inay sii shaqeyso. Kadib faafitaanka coronavirus (Covid-19) faafida kadib, warshadaha qaar ayaa si ku meelgaar ah u joojin kara shaqada. [More ...]
Hay'adaha dowliga ah iyo ururada, oo ay diyaariyeen shaqada wadajirka ah ee Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, Agaasinka Guud ee Shaqada iyo Agaasimaha Istaraatiijiyadda iyo Agaasinka Miisaaniyadda, waxaa loo sameyn karaa si furan ama qaab wareejin ah sannadka 2020. [More ...]
İBB waxay xustay in kasta oo tallaabooyinka COVID-19 subaxnimadii Axadda, 2 bas ay ahaayeen kuwa aad u culus isla markaana ay dacwad ka gudbiyeen kuwa la wadaaga 'BB' iyo Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu. Natiijooyinka IMM ee khadadka iyo barta warbaahinta bulshada [More ...]
Sigaarka elektaroonigga ah ayaa noqday mid caan ah hadda. Waxaan bilownay inaan ku aragno sigaar elektaroonig ah gacanta qof walba dariiqa, guriga, maqaayada. Qalabkani waxyeello uma geysanaayo jirka aadanaha marka loo eego sigaarka caadiga ah. Dadka badankood way joojiyaan sigaar cabista [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka Malatya waxay qaaday talaabooyin cusub oo looga soo horjeedo Corona Virus. In kasta oo la qaadayo cabbirrada fogaanta bulshada ee gawaarida gaadiidka dadweynaha, cabirrada dabka waxaa loo sameeyaa rakaabka imanaya MAŞTİ. Dowlada Hoose ee Magaalada, oo si feejigan u wada magaalada oo dhan, waxaa iska leh MOTAŞ [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay bilaabeen inay xakameeyaan tagaasida ganacsiga. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa habeysay isu socodsiinta dadka tagaasida iyadoo la raacayo nambarkii ugu dambeeyay ee taarikada gawaaridooda. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay sii wadaa la dagaalanka nooca cusub ee cudurka Coronavirus. Magaalo-weynta, waxaa iska leh Wasaaradda Arrimaha Gudaha [More ...]
Iyada oo qayb ka ah xayiraadda safarka magaalada gudaheeda, duulimaadyada gudaha ee Izmir si weyn ayaa loo baajiyay, sidaa darteed basaska badankood sameynta duullimaadyada diyaaradaha ayaa loo jiiday magaalada. Labada xariiq ayaa la joojiyay. Iyada oo ku saabsan baaxadda la dagaallanka faafitaanka coronavirus [More ...]
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin wuxuu baaray talaabooyinka ay qaadayaan kooxaha Magaalo-xeebeedka ee ku saabsan Faafitaanka Corona Virus (COVID-19) goobta. magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, ka soo adduunka iyo Jamhuuriyadda Dadka iyo Turkey sarkhaansan [More ...]
Gaziantep degmada Metropolitan, Corona Virus (Covidien-19), marka lagu daro wareegtada ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha gaadiidka dadwaynaha, ay talaabo ka qaaday cudurkan ka dhigay a horeysay ee Turkey. Kooxaha Magaalada, taraamka iyo [More ...]
Tonguç Özkan, Madaxa Adana Laanta Hawada ee United Transportation Union: In kasta oo qof waliba uu riixayo 'Joog guriga' adduunka oo dhan, maamulka TCDD wuxuu riixayaa 'Tag shaqada' si adeegyada xamuulka aysan u kala goyn. Dhinac, dowladda [More ...]
Wasaaradda Ganacsiga ayaa furtay Akademiyada Ganacsiga Virtual, oo ah madal u gaar ah kuwa raba inay dhisaan shirkad iyo kuwa doonaya inay ganacsi ka dhex abuuraan. Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan wuxuu siiyaa dhammaan muwaadiniinta lacag la’aan [More ...]
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu yiri waxaan galnay waxa ugu daran labo todobaad markii aan kulan la yeelanay 30 badhasaabyada internetka waxaan ku iri, “Kulankii ugu horeeyey ee guddiga Golaha faafa ee uu hogaaminayo gudoomiyaheena, [More ...]
Marka loo eego tirooyinka lagu shaaciyey websaydhka Wasaaradda Caafimaadka, warbixinta Coronavirus ee ku taariikhaysan 30.03.2020 waa sida soo socota: Guud ahaan, 76.981 baaritaan ayaa la sameeyay 10.837 xaaladood oo toganna waa la helay. Waxaa jira dhimashada 168 iyo 725 qof oo ku jira daryeel culus. [More ...]
Selahattin Gürkan, Duqa Magaalada Malatya Metropolitan District, wuxuu sameeyay baaritaano ku aadan wadada 25-ka mitir ee loo furay wadada toosan ee wadada loo yaqaan ring ring. Isagoo warbixin ka sameynaya halkaan ka dib dib u eegista, Madaxweyne Gürkan wuxuu yiri, “Alparslan wuxuu ka bilaabayaa buundada Ergenekon [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay bilawday inay hirgaliso degenaanshaha qalalaasaha ka dhashay cudurka coronavirus. Duqa Tunç Soyer, "Izmir degmada Metropolitan tusaale ee Turkey oo aan tuuraya codsi saxiixa on dhibaatooyinka degmada cusub [More ...]